Hi Meebo Users! | Karoo Lark Web Messenger Blog
← Goodbye Meebo, Hello KarooLark Web Messenger
Messenger Updated, Improving for Both Web and iPad →
Posted on July 11, 2012 by Karoo Lark
Hi Meebo Users,
We, KarooLark web messenger ( http://karoolark.com/ ), welcome you to our web messenger, instead of Meebo web messengers, which is already shut down today.
You and your friends may feel lost after your familiar Meebo web messenger is no longer there, since today. But don’t let Meebo messing your friendship up. You and your friends can always use KarooLark web messenger to continue chatting with your topics. We supports web Gtalk, MSN, Facebook Chat, Yahoo! Messenger, AIM and ICQ. You can login multiple networks at the same in Chrome/Firefox/IE/Safari on any platform.
Before reaching KarooLark, you may already spent some time searching for Meebo alternative to send messages to your friends. You friends may also do the same things searching foraweb messenger. So don’t forget to email or sendamessage to your friends that they can use KarooLark web messenger, if you find KarooLark is good.
Thousands of KarooLark daily users make us confident that you and your friends will like our web messengers. Don’t forget to give usaFacebook like,atweet oraGoogle plus! If you have any feedback, please comment on our blog.
Say goodbye to Meebo and enjoy KarooLark web messenger. And enjoy “Call me maybe”. Hope you haveagood day.
252 Responses to Hi Meebo Users!
phone number ပေးပါလား
Kris Lafon says:
I used to use meebo messenger and I want to use Karoo lark, but I cant find the website.
ma ma na` khine chin lo par
ံhtet thiri says:
NAN KALYAR LWIN says:
Hi meebo messenger , your website is so good for user.
့ Hi, NAN KALYAR LWIN. မင်္ဂလာပါ လို့နုတ်ဆက်ပါတယ်နော်။မင်းလေးကိုမိတ်ဆွေအဖြစ် ခင်ချင်လို့ပါနော်။မင်းလေးကိုယ့်ကိုမိတ်ဆွေအဖြစ်လက်ခံပေးမယ်လို့ကိုယ်ယုံကြည်ပါတယ်။
aung kaung satt says:
သယ်ရင်းများနဲ့ခင်ချင်လို့ပါအကောင့်ကိုအပ်ပေးလို့ရမလားမသိဘူးကျွန်တော်ကအကောင့်ဖွက့်တာမကြာသေးပါဘူးအကောင့်ကတော့လှိုင်းပေါ်မှာအမြည်းတန်းရှိပါတယ်အမြဲတန်းဖွင့်ထားပါတယ်အပ်မယ်ဆိုကျွန်တော့်အကောင့်က genesis.human2011@gmail.com ပါသယ်ရင်းများအားလုံးကျေးဇုးတင်ပါသည်ူ
If all of as haveawhite heart, the world will be very beautiful.
earthmoon moon says:
yes, White heart should be added honesty and kindness that i think.
ညီမလေး ကို့အကောင့်ကိုအပ်ချင်လဲအပ်ပါမအပ်ချင်လဲ ညီမလေးအကောင့်ကိုတချက်လောက်ပြောပြပါလား ကို့အကောင့်က htunwin2011@gmail.com ပါ
zaw paing soe says:
Karoolarkသုံးတာ အဆင်မပြေဘူး အကို နည်းနည်းကူညီနိုင်မလား
အကိုတော့ဟုတ်ဘူးနော် အမပါ Karoo သုံးတာ အမလည်း သုံးဖြစ်တာများပါတယ်
သူက နည်းနည်းတော့စောင့်ရတယ် အဆင်ပြေပါတယ် သည်းခံပြီးစောင့်သုံးပါ account လေးတွေပေါ်လာတဲ့အထိစောင့်ပြီး သုံးပါ အဲဒီအခါ အဆင်ပြေပါပြီ
လိုင်းတွေလဲမကောင်းဘူး ဗျာ လိုင်းကြေး တော့ ပုံမှန်ဆောင်နေရတယ်ဗျာ
လိုင်းကောင်အောင် လုပ်ပေးကြ ပါ ရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ဗျာ ဟီဟီ ဟဲဟဲ
ချစ်သူ နဲ့ကောင်းကောင်း မပြောရဘူးဗျာ စီတ်ညစ်တယ် ဗျာ………….
လိုင်းတွေကတော်တော်ဆိုးတယ်နော် ဘားမှကိုကောင်းကောင်းသုံးလို့မရဘူး ကူညီပါအုံး ရတနာမြတ်သုံးပါ
moe yu ya says:
Q:what is your name?
Q:where you live?
easrthmoon moon says:
So that , my account is earthmoon.
hi …….how are you?where you stay.my name is
zinawwzar.are you?I want to be attched to you.
Hi, Stargirl .ငါ့ကိုစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့မင်းကရေမချိုးဘူပေါ့နော်။
စိတ်ညစ်ဖို့ပဲဆို တော်သေးတယ်မှတ်ပါ ကွယ်
1. နာရီကို5ရာကျပ်တဲ့ဗျာ
hi …….how are you?
toe toe says:
toetoe.kglay@gmail ကိုအကောင့်အပ်ကြပါနော် mail လည်းပို.ပေးနော်…
toetoe.kglay@gmail က facebook အကောင့်လား
khine lay says:
hi အားလုံးဘဲ မင်္ဂလာပါ နော်
အချစ်မှာ မျက်စိမရှိဘူးဆို မှန်ပါသလား
မျက်စိမရှိရုံဘယ်ကမလဲ အချစ်နဲ့တွေ့ရင် ဘာဆိုဘာမှမရှိတော့တာ ယုံလား
nyaine chan myint says:
htet thiri says:
သီရိအကောင့်က htetthirikaykhaing@gmail.com ပါ ယူအပ်ချင်အပ်လိုက်လေ
မင်္ဂလာပါ သုံးရသူတွေ အဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ
” ဘယ်တော့မှမနစ်မြူပ်နိုင်ဘူး…. ဆိုတယ့် တိုင်းတနှစ်..သဘော်ကြီးတောင်
ရေးအောက်ကြမ်းပြင် သို.စီး0င်သွားတာဘဲ “”
အားလုံးနဲ့ခင်ချင်ပါတယ် ခက် ကိုအားလုံး ခင်မယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်။
ငါ့ကိုခင်နိုင်ပါတယ် gentleman.mkt ပါ
kaunn kin says:
hi ..အာလုံနဲ့ ခင်ချင်လိုပါ..
These website have all of friend I wantafriends.
sweet well, sweet dream, “snow”
်ိf isherman789456@mail.com အကောက်လေကိုအပ်ပေးကြ့ပါနော်သူငယ်ချင်းတွေမရှိကြလိုပါ.။
kogyi kyaw says:
Who are you dream algel.I went to your name please you tell me.
yoke soe ma lay says:
guitarlovegirl.2012 invited လုပ်လိုက်မယ်နော်
joker789lay@gmail.com အားလုံးကိုခင်ပါတယ် အဲဒီကောက်လေအပ်ပေးပါနော်ကျေးဇူးပြုပြီးပေါ သယ်ရင်တို့ရေ ငါက ချက်တင်းထိုင်းတာမကြားသေးဘူးဆိုတောအကောက်ထဲ့မှာ လူုတွေမရှီလိုပါနော်………………….။အားလုံးကိုလဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်××××××××××××-
မောင်ဇထန်း says:
i ‘m trying the best!
Hi,hello .how are you today?
I’m very very to chat many people with on online chat.
Onlin chat is written thank you very much.
Welcom all my friend.
ံHow much do you want ?
tun aye chit says:
လိုင်းတွေက ကောင်း ကိုမကောင်းတာပါ ချစ်သူနဲ့ အထင်လွဲမှုတွေဖြစ် ချစ်သူက ဖြတ် နောက်တစ်ယောက် ဆက်ချစ် ဖြတ်ချစ်ဖြတ်ချစ် ဖြစ်နေတယ်ဗျာ အားလုံးနဲ့ခင်ချင်ပါတယ် blueskyboy.bsk777@gmail.com ကို အပ်ပေးကြပါနော်
စိုင်းရဲမင်းသိန်း ၈ တန်းကျောင်းသားလေး says:
လိုင်းကလည်းဗျာဘယ်လိုလုပ်ရမှာလည်း karoolark တောင်မတက်ဘူးဆိုတော့
ခင်မင်တတ်တဲ့ လူသားအားလုံကို နော်……..ခင်ပါရစေ။
လိုင်းပြန်ကောင်းချင်ရင် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးလေးနဲ. ဟလိုး လိုင်းမကောင်းလို. လိုင်းကောင်းအောင် မန်းမှုတ်ပေးပါလား ဦးဦး လိုင်းမန်းခင်ဗျားလို.ပြောကြနော် ဒျဆိုရင် လိုင်းမကောင်းတာ လိုင့်းတာတွေမရှိတော.ဘူးပေါ.နော် ဟုတ်ဘူးလား နော်ကြီးလို.
လိုဟဲ အော်မှားသွားလိုပါ ဆော့ရီး ဟဲလို မာကလာပင်းအော်မှားပြန်ပြီး မင်္ဂလာပါ
အကောက်ထဲ့မှားလူုမရှီလိုပါ အကောက်လေတစ်ခုကျေးဇူးပြုပြီးအပ်ပေးပါနော် …………။
fishermanmoe916@gmail.com အပ်ပေးပါနော် ကျေးဇူးပြုပြီးနော်…။
Its not even near by meebo. I’ll give u -100 number. If you logged in meebo once it’ll track your login and allow to chat on any page where meebo installed. In your chat bar we have to login each time even we refresh the same page. You tried best but don’t compare it with meebo…
i’m very lonely….please, invite me ..thanks!
ဒီထဲမှာက ဘာတွေလည်း. ခင်ဗျာ. သိချင်လို့ ပါ ပြောပြပေးလို့ မရဘူးလား.. နော်
အကုန်လုံးကိုခင်ပါတယ်.ဗျာ…heinkhant66@gmail.com ကိုအပ်ပေးကြပါ…လိုင်းကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိူင်ရင် အကောင်းဆုံးပေါ့…
Ei Moe Phyu says:
hay ခင်ချင်လို့ပါ
Belive it or not me……….
Ma Thet Zon says:
အားလုံးကိုခင်ချင်ပါတယ် ။ shoutsalmay@gmail.comကိုaddချင်ရင်လည်း——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Thank u for ur website,but connection in myanmar so bad…… *¥*
ဒီမှာက လူတွေမရှိဘူး နတ်တွေပဲရှီတယ် အဲ နတ်သမီးလေးတွေတော့များတယ်နော် အဟဲ
လိုင်းတွေကလည်းတော်တော်ဆိုးနေတယ်………..ဘားမှကိုပြန်ပြောလို့လည်းမရပါလားနော် စိတ်ညစ်ပါတယ်………….သူငယ်ချင်းတို့ရေ လူတိုင်းအပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်ပြီး နားလည်းခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့လူတိုင်းကိုခင်ချင်ပါတယ်
လူတိုင်းဆိုတာထက် နားလည်ခင်မင်သိတတ်ပြီး ရိုးသားလိမ္မာတဲ့သယ်ရင်းလေးကို ခင်မင်ပါတယ်ကွယ်
phyo mg mg says:
Welcome to all friends. May GOD Bless you all……….
Ye Khant Phyo says:
ဒီထဲမှာနတ်သမီးတွေ များတယ်ဆို နတ်ဆိုတော့ လိုင်းတွေကောင်းအောင်လုပ်ပေးပါဗျာ ခဏခဏ
မျှော်လင်.ထားသမျှဖြစ်မလာဘူးနော် လောကကြီးက ဘာလဲကွာ စိတ်ပျက်ဖို.ကောင်းလိုက်တာကွာ လူသားအားလုံးလည်း ဘ၀မှာ အရာရာအားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ.ပါစေလို.ဆူတောင်းလျက် harkarz3793 🙂 🙂 🙂
အဝေရောက်ချစ်သူရေ မြန်မြန်ပြန်လာခဲ.ပါကွာ ကိုယ်စောင်.နေရတာ လွမ်းလွန်းလို.သေတော.မယ် ဆောင်းရယ် မင်းကလွဲပြီးအကို.ကို ကယ်နိုင်မဲ.ဆေးပေးနိုင်မဲ.သူရှိမှာမဟုတ်တော.ဘူး ဆောင်းရယ် ချစ်ျနလျှက် ပခုက္ကူသားလေ jjustinboy1993
Should you don’t mind my asking, do you make great money from this web site?
သယ်ရင်းဂျစ်စုပ် မင်းနဲ့ငါက ဘ၀တူတွေပါကွာ ငါကောင်မလေးနဲ့ကွဲသွားတာ (၃)နှစ်တောင်ရှိပြီအဆက်အသွယ်တောင်မရဘူးကွာ။ ဒါပေမယ့်မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့စောင့်ရတာပေါ့။ဟဲဟဲ ……………
စောင့်မျော်နေတုန်ဆိုတော ဘော်ဘော်ye khant phyoကို
လေးစားပါတယ် ဒါပင်မဲ့ ကောင်မလေးဘော်ဘော်ဆီပြန်ရောက်ရင်
ဂျစ်စုပ်လိုတော့မခေါ်ပါနဲ ဒီနာမည်က ကျွန်တော်ကောင်မလေး
အားလုံးကို ခင်ပါတယ်ဗျာ…………. ကျနော့်အကောင့်ကိုလဲ အက်ပေးကြပါနော်.. midnight24.amo@gmail.com ပါ
Hello! My friend forwarded me this address because he thought it’s cool and I have to agree with him. Really cool post you have here^^
chitthumglay1501@gmail.com ပါ…….ဘေးက ငတိက ကလိနေလို့သည်းခံပေးကြပါနော်……. အားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီး ပါ…………..
ကျွန်တော် ကhninaung1994@gmail.com လူတိုင်း ကို ခင်ချင်ပါတယ်
ဘယ်ရောက်နေကြလဲ သူငယ်ချင်းတို.၇ယ် ….
ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော သယ်ရင်းဘေးမှာပေါ့ လှည့်ကြည့်လိုက်လေ
ဘယ်မှ မသွား ပါဘူး
လူတွေကို ရိုက်ချင်တာလား ပုံရိပ်တွေ ကို ရိုက်ချင်တာလား
wai yan moemoe says:
hi my name is wai yan lwin
သူငယ်ချင်း တို.ကို ခင်ပါတယ် ဒီအကောက်ကို အပ်ပေးပါayeko542@gmail.com
where aer you going now?
စိတ်ကထင်မိကိုယ်အဖြစ်ဒီလိုတူသယောင်ယောင်ငါအဖြစ်အထူး သူနဲ့ဆင်သော် ငါလည်းအရူးဖြစ်ခဲ့ရပြီ ချစ်သူ—————
ကြယ်လေးငယ် ဆိုတာ ကေါင်ကင်ပေါ်ကဆင်းလါတာလါ
နှင်းအောင် (ခ) ပိုက်ထွေး says:
လူသားတွေအား ကျမ္မာ ကြရု.လား သူငယ်ချင်းတို. မင်းတို.တွေအားလုံးကိုခင်ပါတယ် နေကောင်းအောင်ဂရုစိုက်ကြနော်
Nan su says:
ချစ်တယ်ဆိုတာကတော့ ၁ယောက်ယောက်ကို၁ယောက်ယောက်ကနှလုံးသားထဲထည့် ထားတာပေါ့ ဗျာ……ဟုတ်ကဲ့ 
ငါ့ ကိုယ်ငါခင်း……………………တံတားတစ်စင်းဖြစ်ခဲ့ ရင်
ငါ့ ကိုယ်ငါခွဲခြမ်း…………………လမ်းတစ်လမ်းဖြစ်ခဲ့ ရင်
စကားပြောချင်လို့ ပါယူနဲ့ 
အဝေးမှာရှိတဲ့ သူ၁ယောက်ကိုချစ်ခဲ့ ……
ခင်ပြီး နိုင်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်
ပေးတဲ့ ဆုနဲ့ ပြည့် ပါစေ……….
ဟီးဟီး က ဘာလဲ
နင်ေ၇ာပျော်ရဲ့လားကမ္ဘာမှာငါတစ်ယောက်တည်းအားတယ်ထင်ပါ့ မင်းရောငါလိုပဲ စကမလ လား